Tontolo_iainana · Janoary, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Tontolo_iainana · Janoary, 2013
Tantara mikasika ny Tontolo_iainana tamin'ny Janoary, 2013
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 17 Janoary 2013
Ho an'ireo Iraniana an-tapitrisa, fahavalom-bahoaka voalohany nandritra ny taona maro ny fahalotoan'ny rivotra iainana. Tany ampiandohan'ity volana ity, nanambàra ny Minisitry ny Fahasalamana fa olona maherin'ny 4.400 tamin'ny taona lasa no namoy ny ainy noho ny fahalotoan'ny rivotra tao Teheran, renivohitr'i Irana.
Azia Atsinanana 07 Janoary 2013
Nisotro, nandro sy nisasa taminà rano misy poizina nandritra ny dimy andro ny mponina tao amin'ny tanànan'i Handan any Shina. Voapoizin'ny loto indostrialy avy ao amin'ny faritanin'i Shanxi mpifanolo-bodirindrina anminy ilay tena loharanon-dranon'ny tanàna - ny reniranon'i Zhanghe - tamin'ny 31 Desambra 2012. Niteraka fanamelohana niparitaka ve tety anaty aterineto ny fanivànan'ny governemanta ao an-toerana ny vaovao sy ny tsy firaharahian-dry zareo ny fanitsakitsahana goavana atao amin'ny tontolo iainana.
Taiwan: Fanirian'ny Taona Vaovao Tsy Hisian'ny Nokleary
Tena hafakely mihitsy ny fankalazana ny taona vaovao tamin'ity taona ity satria niara-niasa hanolotra firenena iray lavitry ny nokleary ho toa ny firariantsoa iraisan'ny vahoaka Taiwanese ho an'ny taona 2013 [zh] ireo mpihira malaza, mpikatroka mafàna fo mpiaro tontolo iainana sy ireo tanora.